Susana godoy | 15/09/2021 16:00 | ချစ်. ကစား
ခွေးမွေးသောကလေးများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပထမအခိုက်အတန့်မှသတိပြုမိလိမ့်မည်မရ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရှိတဲ့အခါတစ်ခါတစ်လေငါတို့ကိုအဲဒါကိုနှစ်ခါလောက်ပိုစဉ်းစားစေတာအမှန်ပဲ။ ယေဘူယျအားဖြင့်စည်းကမ်းနှင့်အညီအမြဲတမ်းသီလနှင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
လူများစုသည်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ခွေးများကို ပို၍ ပင်ချစ်ကြသည်။ ဒါဆိုရင်ဒါဟာကောင်းတဲ့နိမိတ်နဲ့ပိုကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးပြီးသွားပြီလား မင်းရဲ့ကလေးတွေကိုအကျိုးပြုမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုရှိတယ်မရ။ ထို့ကြောင့်အိမ်၌တိရစ္ဆာန်ရှိခြင်း၏အားသာချက်များအားလုံးကိုနက်နက်နဲနဲသိရန်အချိန်တန်ပြီ။
1 ခွေးတွေကကလေးတွေကိုဘယ်လိုကူညီကြလဲ၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးတယ်
ကလေးများသည်ခွေးများနှင့်ကြီးပြင်းလာသောအခါအလွန်ထူးခြားသောနှောင်ကြိုးတစ်ခုကြီးထွားလာသည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်ကလေးများနှင့်အပြန်အလှန်မိတ်ဆွေကောင်းများဖြစ်သည်မှာရှင်းပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်တရာအကာအကွယ်ရသည်ဟုခံစားရသည် ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးစေလိမ့်မယ် ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပေါ်လာနိုင်သောစိတ်ဖိစီးမှုများ (သို့) အခြားပြဿနာများကိုထပ်တိုးစေသောစိုးရိမ်စိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ ခွေးကိုပွေ့ဖက်ခြင်း (သို့) ထိခြင်းဖြင့်ဤစိတ်ဖိစီးမှုများလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်နေပြီ။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိခြင်းအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းသည်ရောဂါအသစ်များနှင့်ရောဂါအသစ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်လေ့ရှိသည်မှာမှန်သည်။ တကယ်တော့လေ့လာမှုတွေကဆန့်ကျင်ဘက်ဟာမှန်တယ်လို့အတည်ပြုတယ်။ ခွေးရှိခြင်းသည်ကလေးများအတွက်ကြီးစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်ပုံရသည် ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးကိုထည့်သွင်းသည်၊ သို့သော်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ မှဓာတ်မတည့်မှုအချို့ကိုဖယ်ရှားသည်မရ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကတိရစ္ဆာန်များနှင့်နေလျှင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတစ်မျိုးဖွံ့ဖြိုးလာပြီးကလေးများ၏ခုခံအားစနစ်ကိုတိုးတက်စေသည်။
ခွေးလေးတွေကအနားမှာခွေးရှိနေရင်ပိုလုံခြုံတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါတွေကြောင့်ပါ သင့်အားလုံခြုံမှုခံစားချက်ကိုပေးသည်မရ။ သူတို့ကသူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအမြဲရှိနေမယ်၊ တိရိစ္ဆာန်တွေကသူတို့ကိုဆူပူဖို့၊ သူတို့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲဒါကိုချွင်းချက်မရှိထောက်ပံ့မှုတစ်ခုဆိုတာသူတို့သိတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤအရာအားလုံးအတွက်သူတို့အနားမှာရှိနေသောအခါပိုစိတ်သက်သာရာရစေပြီးဒါကငါတို့စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းပြောခဲ့သောယခင်အရာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
မိဘများသည်ခွေးကိုလမ်းလျှောက်ရန်ခေါ်ဆောင်သူများဖြစ်လိမ့်မည်မှန်သော်လည်းကလေးများသည်သူတို့နှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်သည်။ သင်အိမ်တစ်လုံး၌နေလျှင်ကလေးများသည်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ကစားရန်နေရာပိုအမြဲရှိလိမ့်မည်ဟုပြောခြင်းမရှိပေ။ ဒါကပြောတာပဲ ပိုမိုတက်ကြွသောဘဝရှိသည်မရ။ ဆက်ဆံရေးကိုမြှင့်တင်သည့်အပြင်၎င်းသည်စိတ်ကိုကြည်လင်စေသည်၊ ပျော်ရွှင်မှုသည်သူတို့၏ဘ ၀ ကိုပျော်ရွှင်စေသည်၊ ဖျော်ဖြေရေးကိုအရှိန်မြှင့်လာသည်နှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအမြဲကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီပါ။
ဒါဟာတစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့မဟုတ်ပေမဲ့ငါတို့ရေရှည်မြင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်ရေရှည်မှာအဲဒါကိုငါတို့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ် ကလေးတွေဟာပိုတာဝန်ယူရလိမ့်မယ်မရ။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အခြေခံသဘောတရားများကိုသတိပြုမိကြလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်ခွေးရှိခြင်းသည်ကလေးများအတွက်အခြားအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့မှာသူတို့မှာရေ (သို့) အစာရှိမရှိ၊ သူတို့မေးတဲ့အရာတွေလား၊ သူတို့နေကောင်းလား၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လားဆိုတာစစ်ဆေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ကလေးများသည်စိုးရိမ်စပြုလာပြီးအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သူတို့ဖြည့်ဆည်းရမည့်တာဝန်အချို့ရှိသည်။
ခွေးမွေးသောကလေးများအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိသည် သူတို့သည်အနာဂတ်တွင်မိတ်ဆွေကောင်းမည်သို့ဖွဲ့ရမည်ကိုသိလိမ့်မည်မရ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့မှာအရေးကြီးဆုံးနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ကြီးပြင်းလာလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကလေး၏သင်ယူမှုနှင့်ဘ ၀ ၌အခြေခံကျသောအစိတ်အပိုင်းများလည်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ချစ်. ကစား » ခွေးမွေးသောကလေးများအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများ